Filtrer les éléments par date : lundi, 16 décembre 2019
lundi, 16 décembre 2019 21:21
Antsirabe: Nizara vatomamy ho an’ny rehetra ny mpiasan’ny Tahirimbolam-panjakana
Hetsika miavaka no nentin’ny sosialin’ny mpiasan’ny Tahirimbolam-panjakana Antsirabe anamarihana ny fetin’ny Noely 2019 ity. Nizara vatomamy ho an’ireo olona rehetra nanan-draharaha tao aminy izy ireo nanomboka androany 16 desambra, ary hitohy hatramin’ny 24 desambra izao.
Nambaran’i Mbola, filohan’ny sosialy eo anivon’ny Tahimbolam-panjakana Antsirabe fa hetsika efa fanaon’izy ireo ity, saingy novelarina bebe kokoa ho an’ny daholobe tamin’ity indray maka ity, ary heverina fa hotohizana.
« Latsakemboky ny mpiasa no anatanterahina izao asa sosialy fizarana vatomamy ho an’ireo rehetra manan-draharaha ao amin’ny Tahirimbolam-panjakana Antsirabe izao », hoy i Mbola.
Tanterahina any Windkhoek Namibia nanomboka ny 14 desambra teo ka hatramin’ny 22 desambra 2019 ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika amin’ny taranja « échec » natokana ho an’ny tanora latsaky ny 18 taona. Firenena miisa 11 no manana solontena mandray anjara amin’izany dia i Alzeria, Angola, Botswana, Egypta, Kenya, Madagasikara, Mali, Mozambika, Namibia, Afrika Atsimo ary Zimbaboe.
Ny ekipa Malagasy dia ahitana an’ i Rabarison Ny Andolalaina Fitia Noah (U08G), Ramaroson Roy Valhero (U10G), Bakotsihoarana Rojoniaina (U10F), Randriamaharo Ny Avo Mitia (U12F), Andriamanalimanana Tsiresy Haja (U12G), Nomenjanahary Fanilo (U14G), Ramarolafy Grace Gloria (U16F) ary Razanadrakotoarisoa Toavina (U16G).
lundi, 16 décembre 2019 20:50
Ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo: Navory teto Antsirabe ireo mpamokatra koba
Notontosaina teto an-drenivohitr’i Vakinankaratra androany ny atrikasa momba ny fampanaraham-penitra ny famokarana koba ho an’ny zaza sy ny ankizy.
Faritra niisa dimy no nandray anjara tamin’izany dia i Itasy, Analamanga, Vakinankaratra, Amoron’i Mania ary Matsiatra Ambony.
Tanjon’ny fihaonana raha ny nambaran’ny teo anivon’ny “Bureau des Normes à Madagascar”, dia ny fampahafantarana ny « fenitra nasionaly » amin’ireny famokarana koba etsy sy eroa ireny aloha, izay hita fa mahazo vahana tato ato, mba hifanaraka kokoa amin’ny fenitra tokony ho ara-pahasalamana.
lundi, 16 décembre 2019 20:35
Bakalorea « 2ème session exceptionnelle »: Mitaraina ho mbola tsy nahazo ny volan’ny « Ordre de route » ireo mpitsara fanadinana
Roa volana latsaka aty aorian’ny nahavitan’ny bakalorea « 2ème session exceptionnelle », izay notanterahina ny 23 ka hatramin’ny 26 oktobra 2019 nanerana ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara, mitaraina ireo mpitsara fanadinana fa tsy mbola nahazo vola solon’ny sarandalana na « Ordre de route » namitana iny fanadinam-panjakana iny.
Nanamafy ireo mpitsara fa « efa azo ny « vacation » fa ny OR (Ordre de route) no tsy mbola voaray, izay tokony ho 120 000 Ariary isan’olona eo ho eo ».
lundi, 16 décembre 2019 19:58
« Kidnapping »: Nentina atao fanadihadiana aty Toamasina i Haja
Taorian’ny nisamborana an’i Manantena Hajanirina Dinah na Haja, izay efa nokarohin’ny mpitandro ny filaminana hatramin’ny volana martsa 2019 noho izy voatondro ho atidohan’ny fakana an-keriny karana mpandraharaha iray ao Toamasina ny novambra 2018, dia nentina niverina eto Toamasina izy atao fanadihadiana eo anivon'ny zandary misahana ny heloka be vava.
Ifandroritan’ny Fitsarana Toamasina sy ny ao Antananarivo ny raharaha. Etsy ankilany dia mpisolovava maro no ahetsiky ny fianakaviany amin’ity raharaha ity.
Nifanenjehana teny amin’ny Antenimieram-pirenena Tsimbazaza i Haja ny 9 desambra 2019 teo. Tafaporitsaka izy ary tany anaty « WC Public » no voasambotra.
lundi, 16 décembre 2019 19:46
Fiatrehana ireo loza voajanahary: Nanolotra 50 tapitrisa dolara ho an’i Madagasikara ny Banky Iraisam-pirenena
Natao androany 16 desambra 2019, tao amin’ny lapam-panjakana Ambohitsorohitra, ny fanaovan-tsonia izany fifanarahana izany. Hiantoka ny fametrahana rafi-piahiana ara-sosialy ihany koa izao petra-bola izao mba hanafaingana ny fahatongavan’ireo fanampiana eny amin’ireo tra-boina.
lundi, 16 décembre 2019 19:29
Mpanakanto: Nodimandry i Ralava, tarika Rossy
« Lavo Ralava », io no anisany teny nentin’i Rossy, ao amin’ny pejiny io hariva io, nampahafantatra ny besinimaro, ny sakaizan'ny kanto momba ny fahafatesan-dRalava. Mpikambana, mpively aponga maro anaka, sady mpihira ao amin’ny tarika Rossy i Ralava.
Nolazoin’ny aretina fotoana elaela i Ralava. « Tumeur ao amin ny lohany ao no fototr’aretina», raha ny fampitam-baovao nataon’i Rossy tamin’ny volana oktobra 2019, fotoana nampihombo ny aretiny. Nisava nirakotra ny fahasalaman-dRalava taorian’izay.
lundi, 16 décembre 2019 19:24
Fanapoizinana ara-tsakafo tetsy Andravoahangy: Nalefa nody ireo mpianatra narary rehefa nahazo ny fitsaboana nilaina
Mpianatra sy tomponandraikitra miisa 64 ireo narary vokatry ny fanapoizinana ara-tsakafo nitranga tao amin’ny sekoly tsy miankina iray etsy Andravoahangy androany. Mpampianatra sy tomponandraikitry ny sekoly ny 04 tamin’izy ireo. Nentina avy hatrany namonjy ny sampandraharahan’ny famelomana aina sy ny fanapoizinana tetsy amin’ny sampana Vonjy aina an’ny HJRA avokoa izy ireo androany antoandro.
Tsy nisy ny namoy ny ainy fa nandoa sy nivalana ary nalemilemy ireo marary. Nalefa nody ireo marary rehefa nahazo ny fitsaboana nilaina, izay maimaimpoana avokoa.
Fihinanana mofo tao amin’ny « buvette » izay an’ny sekoly ihany no namparary azy ireo araka ny fanazavana azo.
Tonga nankahery ireo niharam-boina ary nitondra ny anjara birikiny ho fanampiana ny sekoly ireo solontena avy amin’ny Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, ny Fampianarana ara-tekinika sy arak’Asa ny hariva teo.
lundi, 16 décembre 2019 17:37
Restitution des Îles malagasy: un test pour le patriotisme malagasy
Au sens figuré, l'analogie est un processus de pensée qui consiste à remarquer une similitude entre deux choses, de nature ou de classe différente. Si la comparaison porte sur deux choses ou personnes de même type, il s'agit d'une ressemblance (ex : entre deux personnes), alors que si elles sont de classe différente, il s'agit d'une analogie, exemple dire de quelqu'un qu' "il est rusé comme un renard".
En rhétorique, une analogie explicite est une comparaison, et une analogie implicite est une métaphore. Le raisonnement par analogie est une forme particulière de raisonnement inductif (remonter du cas singulier au cas général ou de l’expérience à la théorie).
Donc le raisonnement par analogie s’appuie sur une analogie/ressemblance, une association d'idées entre deux situations, par exemple passée/présente, connue/inconnue, etc., à procéder à une comparaison et à aboutir à une conclusion en appliquant à la 2ème situation une caractéristique de la première.
lundi, 16 décembre 2019 16:24
Ambatomarina – Manandriana: Lozam-pifamoivoizana nahafatesana olona enina
Kamiao mpitondra entana avy any Soavina sy mpivarotra mitety tsena no nivadika tao Ambatondraboka, Fokontany Tsiakato, Kaominina Ambatomarina, Distrikan’i Manandriana, Faritra Amoron’i Mania ny sabotsy hariva. Namoy ny ainy ny enina tamin’ireo olona tao anaty fiara, ary fito hafa naratra. Tsaboina ao amin’ny hopitaliben’Ambositra ireto farany.